मधेसमा ओलीको राजनीतिक यात्रा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मोदी भ्रमणका क्रममा जनकपुर पुगेबाहेक प्रदेश २ मा पार्टी र राजकीय काम गर्न सकेका छैनन्
जनकपुर — झन्डै चार वर्षदेखि ‘कोर मधेसी’ क्षेत्रमा राजनीतिक भ्रमण गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार प्रदेश २ सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न जनकपुर ओर्लंदै छन् ।
संविधान जारी गर्नु अघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषयमा मधेसी दलले राखेका तत्कालीन अडानमा विमति राखेपछि ओलीको मधेसमा विरोध भएको थियो । स्थानीय आक्रोश बढेपछि उनका लागि मधेस यात्रा असहज बनेको थियो ।
गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा केही घण्टा जनकपुर पुगेबाहेक उनले प्रदेश २ का जिल्लामा चार वर्षयता पार्टी र राजकीय काम गर्न सकेका छैनन् । २०७३ फागुनमा पार्टीको मेची–महाकाली अभियान लिएर सप्तरी पुग्दा ओलीलाई अवरोध भएको थियो ।
राजविराजमा ओलीलाई उत्रिने नदिने भन्दै मधेसकेन्द्रित पार्टीले विरोध गरेपछि त्यहाँ झडपको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सप्तरीबाटै फर्केका ओली तीनवटै तहका चुनावमा मुलुकभर चुनावी दौडाहामा निस्कँदा पनि प्रदेश २ मा भने गएनन् ।
चार वर्ष अवधिमा उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । चुनावी अभियानमा समेत नगएका ओलीको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ओलीको जनकपुर आगमनलाई लिएर स्थानीय राजनीतिक माहोल अझै विभाजित छ । यद्यपि ओलीको आगमनै रोक्ने खालको अवस्था भने छैन ।
ओलीको आगमनबाट संघीय सरकारका सहयात्री दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम खुसी छन् । उनीहरूले ओलीको शनिबार हुने आगमनलाई विगतमा फाटेको मनलाई जोड्ने र राजनीतिक सम्बन्धहरूलाई सुधार्ने कडीका रूपमा अथ्र्याएका छन् । ओली अनुदार भएकैले संविधानमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको आरोप लगाउने राष्ट्रिय जनता पार्टी आबद्ध एउटा राजनीतिक तप्काले भने आगमनलाई औचित्यहीन ठानेको छ ।
ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी राजपाका नेताले विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभामा हुने सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्ने बताए । अर्का सदस्य मनीष सुमनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा मधेसी जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान संशोधनको समयसीमा निर्धारण गर्ने, मधेसी आन्दोलनकर्मीमाथि लगाइएको झूटा मुद्दा फिर्ता गर्ने तथा रघु साफीलगायतलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा प्रदेशसभामा घोषणा गर्न पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘सामान्य परिस्थितिमा संघीय कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रदेशसभालाई सम्बोधन सर्वथा बेतुकको कुरा हो,’ राजपाका नेता डा. विजयकुमार सिंहले फेसबुकमा लेखेका छन् । सिंहले लेखेको स्टाटसमा राजपा उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य बृषेशचन्द्र लालले गरेको कमेन्ट पनि उस्तै छ । ‘संविधान वा प्रदेशसभा नियमावलीमा ंप्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्ने यस्तो कहीँ कतै छ कि ? जुन व्यक्ति सभाको सदस्य छैनन्, त्यो कसरी सभामा प्रवेश गरेर सभालाई सम्बोधन गर्छन्, कुन नियमले ?’ लालको टिप्पणी छ । राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झाले ओलीको प्रदेशसभामा गर्ने भनिएको सम्बोधन अप्रासांगिक भएको बताए । उनले प्रदेशको अधिकार, संविधान संशोधनलगायतको विषयमा संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदा पनि प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रित गरेकामा आक्रोश व्यक्त गरे ।
मुलुकको प्रधानमन्त्रीको आगमनलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै विरोध भएकामा नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । केही मधेसकेन्द्रित दलका नेताका आचरणले प्रदेश २ का आम नागरिकले दु:ख भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा खुुुुसियाली मनाउने मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू आफ्नै प्रधानमन्त्री आउन लाग्दा किन दु:खी हुनुपर्‍यो, बुझिनसक्नु छ’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने । राजपा संघीय सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाका नेता मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई विरोध गर्नु गैरसंवैधानिक हुने बताए ।
संघीयतालाई संस्थागत गर्ने वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधन तथा प्रदेश २ को समुन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने राय संघीय समाजवादी फोरमका प्रदेशसभा सदस्य रामाशिष यादवको छ । ‘मिलेर समस्या समाधान गर्ने बेला हो । फुटेर होइन, एकजुट भएर प्रदेशको विकास सम्भव छ’ रायले भने ।
नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जनकपुर भ्रमणलाई भव्य बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत शनिबार जनकपुर आउँदै छन् । प्रदेशसभामा सम्बोधनपछि ओली र दाहाल पूर्वी धनुषाको बरमझियामा आयोजना हुने माओवादी युद्धकालमा मारिएका नेता रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा सहभागी हुनेछन् । माओवादी नेता यादवलाई २०५१ भदौ २ मा उनको गाउँ बरमझिया नजिकै हत्या गरिएको थियो ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:१७
काठमाडौँ — मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कानुन लागू भएको दिन शुक्रबार दुई जनाले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा शुभकामना दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि १५ दिन बिदामा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले घरबाटै शुभकामना दिएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वाेच्चको दैनन्दिनको काम सम्हाल्दै आएका ओमप्रकाश मिश्रले भने सिंहदरबार पुगेर औपचारिक समारोहमा नयाँ कानुनले आम मानिसको व्यवहारलाई सुधार्ने अपेक्षाका साथ यसको थालनी शुभ होस् भनी कामना गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशको स्वकीय सचिवालय बालुवाटारका तर्फबाट भन्दै जोशीका छोरा अधिवक्ता प्रवीन्द्रराज जोशीले सञ्चारकर्मीहरूलाई शुभकामना मन्तव्यको प्रति इमेल पठाएका थिए । उक्त मन्तव्यमा संविधान र कानुनको उचित पालना हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ । मन्तव्यमा उनले भनेका छन्, ‘संविधान, कानुनको उचित पालना नगरी आफूखुसी गरिने व्याख्याको कुसंस्कार कायमै रहेमा जतिसुकै नयाँ संविधान, कानुन बने पनि हामी न्यायको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं ।’ करिब डेढ पेज लामो वक्तव्यमा जोशीले आफूलाई कामु प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष भनी परिचय गराएका छन् ।
तर यता सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भनी ओमप्रकाश मिश्रको नाम उल्लेख छ । सर्वाेच्चको नेतृत्व पनि कामुका हैसियतमा मिश्रले नै गरिरहेका छन् । नयाँ कानुन लागू भएको अवसरमा कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको समारोहमा पनि न्यायालयको प्रतिनिधित्व गर्दै मिश्र नै पुगेका थिए र मन्तव्य पनि दिए ।
तर मिश्रले शुभकामनाका केही शब्द बोल्ने पालो आउनुअघि नै कामु प्रधानन्यायाधीशको नाममा जोशीको वक्तव्य सञ्चार गृहहरूमा पुगिसकेको थियो । राजीनामा नदिइसकेकाले आफू प्राविधिक रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीशै छु भन्ने दाबी जोशीमा देखिन्छ । तर सर्वाेच्चले न्यायाधीशहरूको नामावलीको सूचीमा जोशीको नाम पहिलो क्रममा रहे पनि उनलाई कामुका रूपमा नभएर न्यायाधीशका रूपमा मात्रै परिचय गराएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:१५